Ivermectin Injection, Amoxicillin Maka Ọgwụ - Lihua
Albendazole bu ihe ndi ozo nke ndi benzimidazole-ndi ozo site na otutu ikpuru na uzo di elu karia ndi okenye nke imeju. Ọgwụ Pharmacological Action Albendazole tinyere protein microtubule nke eelworm ma rụọ ọrụ. Mgbe albenzene jikọtara ya na tub-tubulin, ọ nwere ike igbochi ngbanwe dị n'etiti albenzene na ulin tubulin na-ezukọta na microtubules. Microtubules bụ ihe owuwu nke m ...
Ihe ngosi Meziwanye arụmọrụ nke uto na ọmụmụ. N'ihe banyere ụkọ vitamin, mineral na Chọpụta mmewere. Mgbe na-agbanwe nri udia Nyere anụmanụ na mgbake n'oge mgbako. Na mgbakwunye n'oge ọgwụgwọ ọgwụ nje. Nnukwu iguzogide ọrịa Na mgbakwunye n'oge ọgwụgwọ ma ọ bụ igbochi ọrịa parasitic. Meewanye nguzogide n'okpuru nrụgide. Ruru ya nnukwu ígwè, vitamin na Chọpụta ọcha ọdịnaya, ọ na-enyere Anumanu aka ịlụ ọgụ anaemia na iji mee ngwangwa ya rec ...
Ọnụọgụ ọgwụ maka nchịkwa ọnụ. Ehi, atụrụ, ewu na ezì: 1 mbadamba / 70kg ahụ ibu. Wdọ aka na ntị pụrụ iche Ejighi ya n'oge ịtọgbọ ọkụkọ. O nwere ike ime ka enweghi nsogbu nke intestinal, ọgwụ na-adịte aka nwere ike ime ka mbelata vitamin B na njikọ vitamin K na absorption, kwesịrị ịgbakwunye vitamin kwesịrị ekwesị. Mmeghachi omume na-adịghị mma Ogologo oge nwere ike imebi akụrụ na usoro ụjọ, na-emetụta uru bara ụba, ma nwee ike ibute nsị sulfonamides. Ndọrọ ego Oge C ...
AdvaCare bụ onye nrụpụta GMP nke Levamisole Hydrochloride Boluses. Levamisole HCL Bolus bụ nke klaasị kemịkalụ a maara dị ka imidazothiazoles ma ọ na-abụkarị ọnụọgụ ọnụ ala dị ala maka anthelmintic maka anụ ụlọ. A na-ejikarị ya nnu nnu chloralhydrate, na mgbe ụfọdụ dịka phosphate. Levamisol HCL na-ejikọ nkịta na nwamba dị ala karịa anụ ụlọ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na AdvaCare's levamisole HCL boluses bụ maka ebumnuche anụmanụ naanị, ị kwesịrị iji ụdị nwere ...
Ọgwụ Ivermectin 1%
Ivermectin bụ otu nke avermectins na omume megide roundworms na nje ndị ọzọ. Egosi Ọgwụgwọ nke eriri afọ nke gburugburu, lice, ọrịa lungworm, oestriasis na scabies na ụmụ ehi, ehi, ewu, atụrụ na ezì. Contra-egosi Nchịkwa na ụmụ anụmanụ na-enye ara ara. Mmetụta Ọgwụ Mgbe ivermectin batara na ala, ọ na-adị mfe ma jidesie ya ike n'ala ma bụrụ nke na-anaghị arụ ọrụ oge. Free ivermectin nwere ike adversely emetụta azụ na ụfọdụ mmiri bo ...
Oxytetracycline Ọgwụ 20%
Oxytetracycline bụ nke otu tetracyclines ma na-eme bacteriostatic megide ọtụtụ Gram-nti na Gram-negative bacteria dịka Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus na Streptococcuspp. Omume nke oxytetracycline dabeere na mgbochi nke njikọ protein nje. Oxytetracycline na-apụkarị na mmamịrị, maka obere akụkụ bile na ụmụ anụmanụ na-agba ara na mmiri ara ehi. Otu ogwu ogbugba maka t ...
Ọgwụ Tylosin 20%
Tylosin bụ ọgwụ mgbochi ọrịa macrolide nke nwere nje bacteriostatic megide Gram-positive na Gram-bacteria dị ka Campylobacter, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus na Treponema spp. na Mycoplasma. Nkọwa Ọrịa afọ na akụkụ iku ume nke nje micro-organis na-akpata nke ukwuu, dị ka Campylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus na Treponema spp. n’ime ehi, ehi, ewu, aturu na ezì. Ihe ngosi nke ihe omuma ...
Levamisole Ọgwụ 10%
Levamisole bụ ihe ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ megide ọtụtụ ikpuru nke eriri afọ na imegide nsị. Levamisole na-ebute mmụba nke akwara akwara na-esochi ahụ mkpọnwụ nke ikpuru. Ngosipụta Prophylaxis na ọgwụgwọ nke ọrịa nsị na ọnya afọ dị ka: Calves, ehi, ewu, atụrụ: Bunostomum, Chabertia, Cooperia, Dictyocaulus, Haemonchus, Nematodirus, Ostertagia, Protostrongylus na Trichostrongylus spp. Ezì: Ascaris suum, Hyostrongyl ...
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 216 nwere akara mahadum ma ọ bụ karịa, na-aza 80% nke ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ahụ.
Otu narị afọ lanarịrị, ịzụ ụmụ anụmanụ siri ike, ọrụ ugbo na-aga nke ọma
Anyị R & D.
Anọ iche iche nke mba ọhụrụ ọgwụ ọjọọ, isii iche iche nke patent ngwaahịa na atọ iche iche nke nkwadebe ụzọ nke mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ na etinyere.
A na-ebupụ ngwaahịa ya na mba 15 (Ethiopia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, wdg).
Hebei Lihua ọgwụ Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise ọkachamara mmepe, mmepụta, ahịa na oru ọrụ nke anụmanụ na nkà mmụta ọgwụ, na a aha isi obodo nke 80 nde yuan.
Site na ebumnuche nke "Otu narị afọ nke ndụ, oke anụmanụ siri ike na ịba ụba nke ọrụ ubi", ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị ịbụ onye na-eweta ngwaahịa ọgwụgwọ mba ụwa nke mbụ dabere na teknụzụ na talent.